Uhambo lwasentlango luphelile, iWiFi ifikelela koololiwe be-RENFE | Iindaba zeGajethi
Uhambo lwasentlango luphelile, i-WiFi ifikelela koololiwe be-RENFE
Ukuhamba ngololiwe weRENFE yinto entle kwaye ngamanye amaxesha ide ibe yezoqoqosho, kodwa uninzi lwethu oluyisebenzisa amaxesha ngamaxesha ukuhamba luphosakele ukuba bangatshintsha imovie ekusasazayo kunye nenethiwekhi yeWiFi yokunxibelelana nayo. Ngethamsanqa okwesibini sele kukho isisombululo kwaye kunjalo namhlanje kubhengeziwe ukuba oololiwe be-AVE sele benayo i-WiFi.
Akubonakali ngathi yiprojekthi efanelekileyo kwaye kukuba phantse naphina apho unokufumana inethiwekhi yeWiFi yokunxibelelana nayo, kodwa kwintetho yeprojekthi abongameli bakaloliwe kunye neTelefonica, kunye nomphathiswa obambeleyo woPhuhliso. .
Ukusukela namhlanje kuyakwenzeka ukuba uhambe ngenethiwekhi ye-WiFi ekufuneka isinike vIsantya se-100 Mbps kwaye oko kuya kusinceda ukuba sihambe ngokugqibeleleyo kwinethiwekhi evulekileyo ye-Renfe-WiFi. Kwimeko apho sifuna ukonwaba kancinane kuhambo lwethu sinokufikelela kwinkonzo enomxholo wepremiyamu onikezelwa nguMovistar +.
Ukuqala le nkonzo ye-WiFi koololiwe be-RENFE, i AppRenfe usetyenziso ngoku efumanekayo ukuze ikhutshelwe kwaye apho unokufikelela khona kwikhathalogu ebanzi yothotho kunye neemovie.
Ngoku kufuneka silinde kuphela inethiwekhi ye-WiFi ukuqala ukufikelela kuzo zonke izitimela ze-RENFE, kwaye eSpain ayikho i-AVE kuphela kwaye kukho nezinye izitimela ezininzi apho abantu abaninzi bachitha iiyure ezimbalwa imihla ngemihla ukuya, umzekelo, ukuya kwabo indawo yokusebenza.
Kudala kangakanani na ulinde ukufika kwenethiwekhi ye-WiFi RENFE oololiwe?.
Umthuthukisi: Abahambi beRenfe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uhambo lwasentlango luphelile, i-WiFi ifikelela koololiwe be-RENFE
Hahahaha, iyabulala njengale ikwigumbi leklabhu ye-renfe. Ngapha koko andikwazi kuvula iindaba ngoololiwe bale mihla be-Lama kwi-intanethi yexesha elidlulileyo. Apha sinje, sithengisa umsi kwaye sihlawula nantoni na.
I-Huawei Fit, isongo somsebenzi esitsha esine-monochrome screen
Imivuzo yemihla ngemihla iza kwiPokémon Yiya ngohlaziyo olutsha lomdlalo othandwayo